ओली-प्रचण्डले विप्लवको पार्टीको नामै हडप्‍ने, अब के होला? – MySansar
ओली-प्रचण्डले विप्लवको पार्टीको नामै हडप्‍ने, अब के होला?
अब देशमा दुई वटा ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ नामको पार्टी रहने भो। प्रचण्डसँग टुक्रिएर वैद्यसँग गएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को पार्टीले वैद्यसित पनि फुटेर बनाएको पार्टीको नाम २०७३ फागुनमा रोल्पाको थवाङमा भएको ८ औँ महाधिवेशनले परिवर्तन गरी ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ राखेको थियो। फागुन ७ गते राति अबेर बालुवाटारमा भएको एमाले र मा‌ओवादी केन्द्रबीच भएको सात बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा पनि एकीकृत पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ नै रहने तय गरिएको छ। भएन त अब कन्फ्युज। के छ त उपाय? उतिबेला नेकपा मशाल र नेकपा मसाल गरी मोटो ‘श’ र पातलो ‘स’ गरी पार्टी छुट्याए जस्तो अब एउटा मध्यमार्गी बाटो अपनाउनु पर्ने हुन्छ- एउटा पार्टीले कम्युनिष्ट पार्टी लेख्ने अनि अर्कोले कम्युनिस्ट। त्यसो गरे बल्ल नामको फरक छुट्टिएला। नत्र त कसको पार्टीले के गरेको हो भेउ पाउनै मुश्किल हुनेछ। ओली – प्रचण्डको पार्टीले हो कि विप्लव पार्टीले।
दुई पार्टीको कुरा अहिले नै मिल्दैन। विप्लव पार्टीले अस्ति भर्खर विज्ञप्ति निकालेर ओली सरकारलाई भक्कुमार गाली गरेको थियो। विज्ञप्तिमा ओलीलाई ‘कथित सामाजिक दलाल पुँजीवादी’ भनिएको छ। ओली सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको चेतावनी पनि त्यसमा दिइएको छ।
अब झन् आफ्नै पार्टीको नाम ओली-प्रचण्डले खोस्ने भएपछि विप्लवले के गर्ने होलान् त बरा !